Caws ciriiri | February 2020
Noocyada ugu waaweyn iyo noocyada kala duwan ee datura ee koraya beerta
Editor Ee Doorashada February 25,2020
Ugu Weyn Ee Caws ciriiri
Datura waa mid dhirta oo keliya ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo meelaha ugu muhiimsan, sariiraha ubaxa, sariiraha ubaxa. Waxaa jira noocyo noocaas ah sida Datura caadiga, Hindiya, Meteloides, Hindiya. Dhammaantood way ku kala duwan yihiin dhererka afkoda iyo midabka burooyinkeeda. Datura waxaa loo isticmaalaa daawada. Iyada oo ku saleysan abuur ay soo saaraan daawooyinka cilminafsiga psychotropic.
Waa maxay abuuritaanka duurka yaanyo ee lagu koriyo iyo sida loo sameeyo habka saxda ah?
Sida loola dhaqmo boodada jilicsan ee kaabajka
Dukaamoolaha fitamiinada: salad leh shimbiro iyo kaabajka Chinese
Xeerarka loo qaado geedo of basbaaska macaan: ha ahaato in la sameeyo, sida loo naaquso, iyo sifooyinka daryeelka ka dib qaabsocodka
Waayeelka nolosha ee qaxwaha ee duurka iyo guriga
Sida ugu dhaqsaha badan qaboojiyaha qabowga iyo maalmaha gu'ga ee ugu horeeya, goobaha beerta iyo dukaamada beeralayadu waxay bilaabaan inay bixiyaan noocyada kala duwan ee dalagyada miraha, miraha kala duwan iyo dhirta kale ee ornamental. Mararka qaar iibiyayaashu waxay bixiyaan geedo aan caan ahayn oo leh magac aan caadi ahayn oo la xasuusto "Hibiscus". Read More
Foostada ilkaha: qaababka dhismaha iyo dhibaatooyinka suurtagalka ah
Isku-dubarid lagu koriyo oo lagu qurxiyo gudaha: sawirrada, sariiraha, qaybaha, waraabka iyo waraabka hawo-qaadidda
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Caws ciriiri 2020